Chelsea Oo Xasuuqday Barnsley Kuna Garaacday Lix Gool Iyo Eber – Heemaal News Network
Chelsea Oo Xasuuqday Barnsley Kuna Garaacday Lix Gool Iyo Eber
Chelsea ayaa xasuuq u geysatay kooxda yar ee Barnsley oo ay isku haleeleen wareegga saddexaad ee tartanka Carabao Cup, kulan ay Chelsea ugu soo bilowdeen xiddigaha cusub ee ay xagaagan lasoo wareegtay ee Thiago Silva iyo Kai Havertz, waxaanay ku garaacday 6-0.
Tammy Abraham ayaa Chelsea u bilaabay gool-dhalinta daqiiqaddii 19aad, waxaanu shabaqa dhex dhigay kubbad uu ka faa’iidaystay qalad ay sameeyeen difaaca Barnsley oo uu ka cidhiidhsatay, taas oo inkasta oo ay u muuqatay qalad haddana uu garsooraha ciyaartu tilmaamay inay tahay sax oo uu goolkaasi yahay furaha kulanka.
Blues oo si weyn uga gacan-sarraysay Barnsley oo heerka labaad ah ayaa waxa gool labaad u dhaliyey saxeexooda cusub ee Kai Havertz oo si qabow u dhamaystiray kubbad uu ka helay Mason Mount sagaal daqiiqadood kaddib goolka hore.
45kii daqiiqadood ee qaybta hore ayay Chelsea samaysay fursado badan, waxaanay ku dhowaadeen inay dhaliyaan goolal badan oo kale laakiin waxa u babac-dhigay goolhaye Baradley Collins oo inkasta oo laba gool la dhaafiyey haddana fursado kale badbaadiyey.
Qaybtii labaad ayay Chelsea heshay taatikadii ay goolasha kaga dhalin lahayd Barnsley, waxaana laba daqiiqadood oo kaliya markii ay socotay qaybta dambe goolka saddexaad u dhaliyey weeraryahanka laacibka khadka dhexe ee Ross Barkley, waxaana ku xigay oo laba gool oo daran doorri ah oo kale raaciyey Kai Havertz oo xaqiijistay saddexleydiisii ugu horreysay ee waayihiisa Chelsea.
Ciyaarta oo maraysa 5-0 ayuu natiijada ciyaarta sii xumeeyey Olivier Giroud oo ka dhigay 6-0, waxaanay sidaas Chelsea ugu soo gudubtay wareegga afraad ee tartanka Carabao Cup.
Dhinaca kale, Arsenal ayaa 2-0 ku garaacday Leicester City oo ay marti ugu ahayd King Power Stadium, waxaana tababare Mikel Arteta oo isbeddelo badan ku sameeyey safkiisu uu farxad ugu damaashaaday wareegga afraad oo ay kooxdiisu iska xaadirisay.
Arsenal ayaa goolka koowaad u dabbaal-degtay daqiiqaddii 57aad oo uu goolka furitaanka iska dhaliyey Christian Fuchs, waxaana iyadoo ay Leicester raadinayso goolka barbarraha niyadda ka jabiyey da’yarka Nketiah oo daqiiqaddii 90aad goolka labaad u dhaliyey Arsenal.
Waxa kale oo wareegga afraad ee Carabao Cup iska xaadiriyey kooxaha Fulham, Burnley, Brighton, Stoke City, Everton iyo Newcastle United.
Trump Oo Warkiisa Cadeeyey “Xilka Si Dhib Yar Kuma Wareejinayo”